Iran Oo Sheegtay Inay Ku Guulaystay Soo Saarista Daawooyinka Coronavirus Iyo Qalabka Caafimaadka - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Iran Oo Sheegtay Inay Ku Guulaystay Soo Saarista Daawooyinka Coronavirus Iyo Qalabka Caafimaadka
“Haddii lagu helo dambiga ah ‘faafinta Coronavirus iyo musuqmaasuqa tahriibinta qalabka iyo dawooyinka Caafimaadka ee lagula tacaalayo Coronavirus, waxay waajihi karaan ciqaabta dilka” Af-hayeenka garsoorka Iiraan.
Tehran(ANN)-Xukuumadda Iran, ayaa sheegtay inay si weyn ugu guulaysatay La-dagaallanka virus-ka Coronavirus, isla markaana ay sii laba jibaarantay wax-soo-saarka lagu dagalamayo ee dilaya jeermiska, qalabka iyo alaabada nadaafadda ee loo adeegsanayo Coronavirus.
“Iiraan waxay leedahay wax-soo-saarka dawooyinka jeermis-dileyaasha iyo waxyaabaha nadaafadda ugu yaraan waa la laban-laabmay labadii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo waddanku sii xoojinayo dagaalka ka dhanka ah dillaaca cusub ee coronavirus.” sidaa waxa yidhi, Reza Rahmani oo ah Wasiirka Wershadaha, Macdanta iyo Ganacsiga.
Sidoo kale Af-hayeenka garsoorka Iiraan, Gholam-Hossein Esmaili, ayaa lka hadlay xadhiga dad badan oo xabsiga loo taxaabay, kuwaas oo lagu eedeeyay inay tahriibinayeen sahayda caafimaadka, sida jeermis-dilayaasha, qalabka afka lagu xidho iyo galoofyada, waxa kale oo uu ka hadlay dadka loo xidhay inay faafinayeen Fayriska Coronavirus iyo ciqaabta ay la kulmi karaan.
” Haddii lagu helo dambiga ah ‘fiafinta Coronavirus iyo musuqmaasuqa tahriibinta qalabka iyo dawooyinka Caafimaadka ee lagula tacaalayo Coronavirus,
shakhsiyaadkaasi waxay waajihi karaan ciqaabta dilka. Haddii kale, waxaa loogu bedeli karaa muddo dheer oo xabsi ah oo u dhexeeya shan illaa 20 sanno ah.” ayuu yidhi, Af-hayeenka garsoorka Iiraan, Gholam-Hossein Esmaili oo arrintaa sharaxaya.